July 2019 – Toyota Mingalar
SPECIAL PROMOTION @ JUNCTION SQUARE ON AUGUST 9-10
ကားတန်ဘိုးရဲ့10% ပေးချေရုံနဲ့ TOYOTA ကားသစ်ကြီးစီးနိုင်ပြီ ” Toyota Mingalar ရဲ့ 10% Down payment နဲ့ ကားဝယ်ယူနိုင်မယ့် Roadshow ပွဲလေးမှာ Brand New Cars တွေကို စီး လို့ရပီနော်…. မကြာခင် ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Toyota Mingalar ရဲ့ Roadshow ပွဲလေးမှာ ကားတန်ဖိုးရဲ့ 10% ပေးသွင်းရုံနဲ့ Zero Kilo Brand New ကားသစ်ကြီးတစ်စီး ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြား အထူး Promotion အစီအစဉ်များစွာလည်းရှိတာဖြစ်လို့ ပြပွဲလေးကို ဆက်ဆက်လာရောက်လေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင့်။ – မှတ်ချက်။ ။ဒီအခွင့်အရေးလေးတွေက ပြပွဲကာလအတွင်းသာရနိုင်မှာမို့ဆက်ဆက်လာဖို့မမေ့နဲ့နော် – နေရာ ။ ။Junction Square(ဟံသာဝတီဝိုင်းအနီး)။ ပြည်လမ်း။ ရန်ကုန်မြို့။ – နေ့ရက် ။ ။ August (9) မှ…
event, promotion, toyota
Comments Off on SPECIAL PROMOTION @ JUNCTION SQUARE ON AUGUST 9-10
မြန်မာနိုင်ငံမှ Toyota ကားချစ်သူတွေအတွက် Toyota ရဲ့ စေတနာတုံ့ပြန်မှု
ယခုအခါ မိုးရာသီကိုရောက်ရှိလို့ လာပါပြီ။ မုတ်သုံဟာ မိုးနဲ့အတူ ကားပိုင်ရှင်တွေ၊ ကားမောင်းသူတွေအတွက် သတိထားရမယ့် အချိန်ကာလကို သယ်ဆောင်လာပါပြီ။ ယာဉ်မောင်းနှင်သူတွေဟာ ရာသီမရွေး၊ အချိန်မရွေး မိမိကားကို ဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းမှုများပြုလုပ်ပီး သတိထားမောင်းနှင်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလို မိုးရာသီအချိန်ကာလမျိုးမှာ မိုးရေကြောင့် စွတ်စိုချော်ချွတ်နေတဲ့ လမ်းမတွေ၊ မြင်ကွင်းမရှင်းတာတွေဖြစ်တတ်လို့ ယာဉ်မောင်းသူတွေအနေနဲ့ ပိုမိုသတိထားမောင်းနှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် မိမိတို့ မောင်းနှင်မယ့် ကား ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးကို ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သင့်ကားကြံ့ခိုင်ရေးကို ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်ပါက အင်ဂျင်အပူလွန်ကဲခြင်း နဲ့ တုန်ခါခြင်း၊ Suspension မကောင်းခြင်း ၊ ဘရိတ်များကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်ခြင်း၊ အသံများထွက်ခြင်း၊ တာယာကွဲထွက်ခြင်း၊ တိုင်မင်ကြိုးများ မကောင်းခြင်း၊ဆီယိုစိမ့် ခြင်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ပုံမှန်စစ်ဆေးထိန်းသိမ်းခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက် အသုံးပြုလျှင် ဆီစားများလာခြင်း၊ သက်တောင့်သက်သာမရှိခြင်း နဲ့ ကြီးမားတဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ…
Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံမှ Toyota ကားချစ်သူတွေအတွက် Toyota ရဲ့ စေတနာတုံ့ပြန်မှု
ကဲ..10% DOWN PAYMENT နဲ့ ဘယ်ကားအမျိုးအစားရွေးချယ်မလဲ….?
ကားတန်ဖိုးရဲ့ ၁၀% ပဲလိုတယ်…. ကဲ..10% Down payment နဲ့ ဘယ်ကားအမျိုးအစားရွေးချယ်မလဲ….?10% Down payment က ကားအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်မို့ ချက်ချင်းဝယ် ချက်ချင်းစီး ချက်ချင်းလန်းလို့ရပီလေ…… တိုယိုတာချစ်သူအပေါင်း 10% Down payment နဲ့ ကားသစ်ကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် Toyota Mingalar က Junction City မှာ မိုးရာသီအထူးကားရောင်းပွဲလေးကို ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက်နေ့ မှ (၁၄) ရက်ထိ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃)ရက်သာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်လို့ အမြန်သာလှမ်းလာခဲ့ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်….. လူကြီးမင်းသိလိုသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်း 01-514940, 01514941,09 5084176, 09 976292095 ,09 421028955, 09 785353487 များသို့လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။
Down payment, Junction City, toyota
Comments Off on ကဲ..10% DOWN PAYMENT နဲ့ ဘယ်ကားအမျိုးအစားရွေးချယ်မလဲ….?
Promotion Items တွေအများကြီးရဖို့ July လမှာကားဝယ်မယ်…
“Promotion Items တွေအများကြီးရဖို့ July လမှာကားဝယ်မယ်…” July လတွင်းကားဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ကားအမျိုးအစားအလိုက် Promotion Items ပေါင်းများစွာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ကားဝယ်ရင် ဘယ်လို Promotion Items တွေရမှာလဲဆိုတော့ Camry ကားဝယ်ယူသူတိုင်းကို Gold Service Package, GGI Insurance,Free Coating Service, Lamina Film Corolla ကားဝယ်ယူသူတိုင်းကို Gold Service Package, GGI Insurance,Free Coating Service Vios ကားဝယ်ယူသူတိုင်းကို Free Coating Service Double Cab ကားဝယ်ယူသူတိုင်းကို Free Lamina Film Rush ကားဝယ်ယူသူတိုင်းကို Free GGI Insurance သို့မဟုတ် Lamina Film Innova ကားဝယ်ယူသူတိုင်းကို Free Lamina Film…. စသည်တို့ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ July လ အတွင်းဝယ်ယူသူတွေသာ ဒီ Promotion ကိုရမှာဖြစ်လို့ အမြန်သာလှမ်းလာခဲ့လိုက်တော့နော်….. လူကြီးမင်းသိလိုသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖုန်း 01-514940, 01514941,09 5084176, 09 976292095 ,09…
Comments Off on Promotion Items တွေအများကြီးရဖို့ July လမှာကားဝယ်မယ်…